‘कम्युनिष्ट भन्दै वीपी कोइरालाले ‘गेट आउट’ भने’ – Merokhushi
‘कम्युनिष्ट भन्दै वीपी कोइरालाले ‘गेट आउट’ भने’
मेरो खुसी । १९ आश्विन, २०७८ मंगलवार १९:०४ मा प्रकाशित
नेपालगन्ज : राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. जनार्दन आचार्य राजनीति, शासन पद्दति र सुशासनका बेथितिका विषयमा निर्धक्क बोल्छन् । तर्कपूर्ण रुपमा लेख्छन् । उनको अभिव्यक्तिमा दम पनि हुन्छ । तिनै प्राध्यापक आचार्यले जीवनकाल भरी राजनीतिकै कारण निकै दुःख र कष्ट भोग्नुप¥यो । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक वीपी कोइराला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठसँग सम्पर्कमा रहेर राजनीतिमा होमिएका आचार्यले राजनीतिक लाभ पाएनन् बरु सास्ती मात्र झेले । जीवनका अन्तरंग संस्मरण समेटेर लेखेको ‘मेरो आदर्श, मेरो विश्वास’ नामक संस्मरणात्मक कृति मंगलबार नेपालगन्जमा विमोचन गरियो ।
क्रियटिभ बुक्सले मंगलबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रा.डा.गोपालप्रसाद घिमिरे र नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले संयुक्त रुपमा पुस्तकको विमोचन गरे । लेखक आचार्यले वीपी र पुष्पलालसँगका संस्मरण, उनीहरुको आचरण र व्यवहारलाई पुस्तकमा उतारेका छन् ।
‘पुष्पलालसँग त वनारसमा ३ वर्ष सँगै काम गरियो । त्यही समयमा वीपीसँग धेरै पटक भेट भएको छ । अन्तरंग कुराकानी भएको छ’, विमोचन समारोहमा पुस्तकको रचनागर्भ सुनाउँदै प्रा.डा.आचार्यले पूराना दिन स्मरण गरे, ‘एक पटक त वीपीले यु आर कम्युनिष्ट गो आउट’ पनि भन्नु भएको थियो ।’
आचार्यले पुस्तकमा पञ्चायतकालदेखि बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै गणतान्त्रिक लोकतन्त्रसम्मको नेपाली राजनीतिका घटनाक्रमलाई मसिनोसँग विश्लेषण गरेका छन् । दाङको कम्युनिष्ट आन्दोलन, दाङ, बनारस र तत्कालीन कोर्डिनेशन केन्द्रसँगको सम्बन्ध, विद्यार्थी आन्दोलन र विश्व विद्यालयभित्रको राजनीतिसँग सम्बन्धित संस्मरण लेखेका छन् । त्यस्तै, दलहरुमा देखिएको सैद्धान्तिक विचलन, नेपालको भारत र चीनसँगको कुटनीति सम्बन्धबारे आफ्ना अनुभूति उनले उल्लेख गरेका छन् । नेताहरु पुष्पलाल श्रेष्ठ, वीपी कोइराला, मरिचमान श्रेष्ठ, सीपी मैनालीजस्ता मुर्धन्य व्यक्तित्वकाबारेमा आचार्यको संगत, भोगाई र बुझाई पनि पुस्तकमा पढ्न सकिन्छ । पुस्तकको सह–लेखन कुमार श्रेष्ठ र सम्पादन जनक नेपालले गरेका हुन् ।
प्रा.डा. जनार्दन आचार्यको पुस्तक ‘मेरो आदर्श : मेरो विश्वास’ विमोचन गर्दै प्रा.डा.गोपालप्रसाद घिमिरे र नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेल